प्यूठान नगरपालिका २ मा नेकपाका पोखरेल विजयी
शनिवार, मंसिर १४, २०७६ केशरराज क्षेत्री
पहिलो पटक जनप्रतिनिधी बनेका पोखरेलले कस्तो बनाउलान वडालाई ?
प्यूठान : प्यूठान नगरपालिका वडा नम्वर २ को वडा अध्यक्षमा नेकपाका मूक्ती पोखरेल विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका मोहनसिँह विष्टलाई २ सय ८४ मतान्तरले पछी पार्दै पोखरेलले चुनाव जितेका हुन् । पोखरेलले १ हजार १ सय २७ र विष्टले ८ सय ४३ मत पाएका छन् । २५ म तबदर भएको छ । वडामा ३ हजार २१ जना मतदातामध्ये १ हजार ९ सय ९५ जनाले मात्र भोट हालेका छन् । कुल मतदाता संख्याको ६१ दशमल ४९ प्रतिशत मत खसेको छ । पोखरेललाई राजमोले साथ दिएको थियो । ऐरावतीका दुई वटै वडा समेत चुनावी तालमेल भएपनि नेकपाले भने राजमोलाई साथ दिएन् ।
निर्वाचित अध्यक्ष पोखरेल ।
को हुन् नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेल ?
जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका मूक्ती पोखरेल खरो र स्पष्ट वक्ताका रुपमा जनस्तरमा चिनिएका नेताको रुपमा सवैले चित्रण गर्दछन् । मनमा लागेको कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्ने उनमा खुवी छ । ५६ वर्षिय पोखरेलले शिक्षक पेशाबाट अवकाश पाएका हुन् । आइ.ए सम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनी लामो समयदेखि राजनीतिसँगै उद्यमशिलताको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।
विभिन्न सामाजिक संस्थाको नेतृत्व सम्हालेको उनमा गतिलो अनुभव छ । भूवनेश्वरी माध्यमिक विद्याय खैरा र अरनीको निमावी दाखाक्वाडीमा गरी उनले २७ वर्ष जागिरे जीवन विताएर अवकाश पाएका हुन् । जागिरे जीवन पुरा गरिसकेपछि अवको बाँकी समय राजनीति र समाजसेवामै खर्चिने उनको दृढ संकल्प छ । ‘दिवंगत हुनुभएका अध्यक्षले अघि सारेका धेरै योजना छन्’,उनले भने,,‘उहाँका योजनासँगै केही नयाँ कामको थालनी गर्नेछु ।’ वडाका कतिपय गाउँमा खानेपानीको समस्याको विकराल अवस्था भएकाले पहिलो प्राथमिकता त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने उनले बताएका छन् । उनी नेकपा प्यूठानका सचिवालय सदस्य हुन् । पोखरेल यसअघि ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिकाको मेयर पदका दावेदार समेत थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, मंसिर १४, २०७६, ११:४९:५०